Facebook မှာ လူမှားပြီး စကားပြော ခဲ့မိရာမှ ချစ်ကြိုက်သွား ခဲ့ကြတဲ့ အသက် (၆၂) နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး နဲ့ (၂၆) နှစ် အရွယ်ကောင်လေး – Let Pan Daily
Facebook မှာ လူမှားပြီး စကားပြော ခဲ့မိရာမှ ချစ်ကြိုက်သွား ခဲ့ကြတဲ့ အသက် (၆၂) နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးနဲ့ (၂၆) နှစ် အရွယ်ကောင်လေး
အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမထက် အသက် ၃၇ နှစ်ငယ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ Facebook ပေါ်မှာ လူမှားပြီးစကားပြောခဲ့ရာမှ အဆိုပါကောင်လေးနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးသွားခဲ့ပြီး ချစ်ကြိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Kent ဒေသမှ အဆိုပါအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကေ တာ့ Isabell Dibble ဖြစ်ပြီး အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
Isabell ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မေလမှာ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် Bayram Boussada ဆိုတဲ့ အမျိုးသားကို Facebook မှာ စ add ခဲ့ပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ် သွားခဲ့ကြပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ Isabell ဟာ Bayram ကို သူမ တူနီးရှားမှာ အားလပ်ရက်ခရီးသွားခဲ့စဉ်က လူတစ်ယောက်နဲ့ အထင်မှားပြီး စကားသွားပြောခဲ့ပါတယ်။ Bayram ကလည်း Isabell အနေနဲ့ လူမှားနေတာဖြစ်ကြောင်း စကားအပြန်အလှန် ပြော ဆိုကြရင်း နောက်ပိုင်းမှာတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် လူချင်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ Bayram ဟာ Isabell ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်း ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာတော့ သူတို့နှစ်ဦးဟာ Bayram နေထိုင်တဲ့ တူနီးရှားမှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Isabell က သူမရဲ့ အကြောင်းကို ပြန်လည်ပြောပြရာ မှာတော့ ” ကျွန်မ နဲ့ Bayram ဟာ Facebook မှာ စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြ ပါတယ်။ ကျွန်မက Bayram ကို လူမှားပြီး စကားသွားပြောခဲ့ပေမယ့် Bayram ကလည်း လူမှားနေတာဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောဆိုကြရင်း ခင်မင်ရင်းနှီး သွားခဲ့ပြီး နောက်ရက်တွေ မှာတော့ နေ့တိုင်း စကားတွေပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တခါတလေ မနက် ၃ နာရီ ထိတောင် စကားတွေပြောဖြစ် ခဲ့ကြပါတယ်။ အသက် ကွာခြားမှုကြောင့် ကျွန်မ သူ့ကိုသံသယ ဖြစ်စရာတွေရှိပေမယ့် သူ့အနေနဲ့ ကျွန်မကိုပိုက်ဆံတောင်းတာမျိုးလည်း မရှိသလို ဘာမှတောင်း ဆိုတာတွေ မရှိခဲ့ဘူး။ သူက ကျွန်မသူ့ဆီသွားနေ မှာလား ဒါမှမဟုတ် သူက ကျွန်မ ဆီကိုလာနေရမှာလားဆိုတာ သူ့အတွက် အ‌‌ရေးကြီးမနေခဲ့ဘူး။ ကျွန်မက အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ မိသားစုကိုမခွဲနိုင်တာကြောင့် အင်္ဂလန်မှာပဲ နေချင် ခဲ့ပါတယ် ” လို့ သူမက ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အင်္ဂလန် မှာနေထိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့ကြပေမယ့် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်ကပ်ဘေးကြောင့် လေကြောင်း လိုင်းများ ကန့်သတ်ထားရာမှ လတ်တလောမှာတော့ တူနီးရှားမှာပဲ ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။
***EMBARGOED TILL 14:00 GMT 24/05/20 – NO ONLINE USE TILL THEN***
Gran-of-ten Isabell Dibble, 62, and Bayram Boussada, 26. See SWNS story SWTPtoyboy; A woman fell in love and marriedatoyboy who is 37 years her junior – after they met online and she mistook him for somebody else. Gran-of-ten Isabell Dibble, 62, fell for Bayram Boussada, 26,ataxi driver, after he added her on Facebook in May 2019. The receptionist mistook him foraman she had met while on holiday in Tunisia, North Africa, and she initially declined his online friend request – thinking he was “too young” for her. However after they got chatting, she realised it wasadifferent person altogether. Although Isabell was skeptical at first, the pair hit it off, and she flew over to meet him in Madeira, Tunisia, in October 2019, where he proposed.
ကျောင်းသား (၂) ယောက် မှာ ကိုဗစ်တွေ့လို့ အထက်တန်းကျောင်း (၆၆) ကျောင်း ကို ပြန်ပိတ်
ကိုဗစ်ပင်လယ်ထဲ ဘယ်ကောက်ရိုးမျှင် ကို ဆွဲရမှန်းမသိ ပတ်ချာ လည်နေတဲ့ အမေရိကန် နဲ့ လေမလျှော့သေး တဲ့ ထရမ့်
အမေရိကန် မှာ ဆန္ဒပြပွဲ အပြီး ဝါရှင်တန်က တပ်ဖွဲ့တွေ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက် ခံရ